रमेश लम्साल | २०७५ असोज २० शनिबार | Saturday, October 06, 2018 ०९:४५:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौं- चन्दा उठाएर साना र समान्य काम भएको त आम मानिसलाई थाहा छ। तर ठूला परियोजना चन्दा उठाएर निर्माण गरिएको इतिहास संसारमा एकदमै कम छ। तर पछिल्लो पटक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले स्वदेशी लगानीमा नै ५ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चन्दा उठाउन थालेका छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि पाकिस्तानले चरम ऊर्जा संकट भोग्दै आएको छ।
दैनिक १२ घन्टा काटिने बिजुलीको कारण जनजीवन प्रभावित हुँदै आएको छ। निर्माणमा रहेका केही आयोजनामा चरम बेथिति र भ्रष्टाचार व्याप्त छ राजनीतिक र क्षेत्रीय स्वार्थका कारण परियोजनाहरुमा समस्या परेका छन्। वर्षेनी बढिरहेको लगानी र औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विकासका कारण पनि ऊर्जाको माग बढ्दै गएको छ। तर समस्या घट्नुको साटो बढ्न थालेपछि नवनिर्वाचित सरकारले नयाँ उपाय निकालेको छ। त्यो हो राष्ट्रिय रुपमा चन्दा अभियान चलाउने र वृहद परियोजनालाई सार्थक बनाउने। पाकिस्तानमा कूल ऊर्जाको औसत माग १७ हजार मेगावाट रहेको छ।
इमरान खान प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। विलाशी सवारी साधानको बिक्री वितरण, कर प्रशासनमा सुधार तथा नागरिककै जीवनशैलीका प्रधानमन्त्री रहने र जनतालाई केही आर्कषक र व्यवहारिक रुपमा सुधारात्मक अभियानबाट प्रधानमन्त्री खान पछिल्लो दिनमा चर्चित छन्।
पाकिस्तानलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन र आन्तरिक लगानीबाट ठूला परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता विकास गर्न सरकारले नै प्रयास गरेको छ। विदेशी दातृ निकाय पनि केही ठूला परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक नभएका हाेइनन्। तर दातृ निकायको ऋणका कारण पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धरापमा परेको भन्दै नवनिर्वाचित सरकारले नयाँ घोषणा गरेको हो। त्यो हो ‘राष्ट्रिय चन्दा अभियान'।
_x000D_ 'ठूला परियोजनामा नागरिकको सहभागिता होओस् भन्ने मान्यताको विकासका लागि पनि त्यस्तो अभ्यास गरिएको हो। जनताको विकास निर्माणको चाहना र राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकलाई नै विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन लागिएको हो' निसारलाई उदृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
चन्दा उठाएर नै आयोजना निर्माण गर्न लागेको पाकिस्तान पहिलो देश भने होइन। यसअघि इथोपियाले पनि चन्दा जस्तै गरी आर्थिक सहयोग संकलन गरेर केही मझौला परियोजना अगाडि बढाएको थियो । टेलिफोन कलमा सुरु गरिएको अभियानले सो देशमा सार्थकता पाएको थियो। तर पाकिस्तानले भने देशभित्रै १२ दशमलव ४ अर्ब डलर रकम जुटाउने अभियान सुरु गरेको छ। त्यो भनेको नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गर्दा १२ खर्ब ४० अर्ब भन्दा बढी हुन जान्छ।
पाकिस्तानमा दुई बाँध बनाउन प्रधानमन्त्री इमरान खानले चन्दा संकलन अभियान थालेको र त्यसका लागि धमाधम पैसा संकलन सुरु हुन थालेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उत्तरी पाकिस्तानमा ४ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको दायमर बासा बाँध र अर्को ८ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत अायोजना निर्माण गर्न मोहम्मद बाँध निर्माण गरिनेछ। करिब ३० हजार करोड रुपैयाँ लागतमा मोहम्मदको काम सन् २०१२ देखि जारी छ। तर आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण आयोजननाको सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन। सवा लाख करोड रुपैयाँ लागत रहने ठानिएको दायमर बासाको काम लगानीको अभावमा हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
किस्तानको सेनाले पनि ठूलो सहयोग गरेको छ। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवाले १ सय करोड पाकिस्तानी मुद्राको चेक हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। पाकिस्तानी सरकारसँग सो बाँध बनाउनका लागि १ सय ४३ करोड पाकिस्तानी मुद्रा मात्रै रहेकाले पनि चन्दा उठाउन थालिएको हो।
चन्दा उठाएर परियोजना अगाडि बढाउने विषय महत्वपूर्ण भएपनि पैसा जम्मा पार्न सरकारले अन्य विकल्प पनि खोज्नुपर्ने समेत उनले बताए।
स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानमा डायमर बासा र मोहन्द ड्याम फन्ड’ खाता खोलिएको छ। ६ अक्टोबर, २०१८ सम्म सो खातामा चार अर्ब ५८ करोड ७१ लाख बढी रकम संकलन भइसकेको छ।
_x000D_ पाकिस्तानका अधिकाशं सञ्चार माध्यमले प्रधानमन्त्री इमरानको पछिल्लो प्रयासलाई सकारात्मक भन्दै समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। विशाल बाँध बनाउन सरकारसँग पैसा अभाव भएपछि खानले चन्दा अभियान थालेका हुन्, यो महत्वपूर्ण अभियान हो, यसलाई सहयोग गरौं भन्दै पाकिस्तानी नागरिकले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
ती ठूला परियोजनाका लागि पाकिस्तानका प्रधानन्याधीश साकिब निसारले प्रधानमन्त्री खानलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै अभियानको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने बताए। सो अभियानलाई प्रधानमन्त्री– प्रधानन्यायाधीश कोष नाम दिइएको छ।
दुई बाँध बनाउने यो प्रयासमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने र अभियान विरुद्ध गए कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने उनले बताए। ठूला बाँध बनाउन सरकारलाई पाकिस्तानको सेनाले पनि ठूलो सहयोग गरेको छ। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवाले १ सय करोड पाकिस्तानी मुद्राको चेक हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। पाकिस्तानी सरकारसँग सो बाँध बनाउनका लागि १ सय ४३ करोड पाकिस्तानी मुद्रा मात्रै रहेकाले पनि चन्दा उठाउन थालिएको हो।
चन्दा संकलनका लागि पाकिस्तानको प्रमुख शहर, चोक तथा गल्ली गल्तीमा ठूला ठूला व्यानर राखिएका छन्। सञ्चार माध्यममा समेत श्रव्य दृश्य सामग्री प्रशारण गरिएको छ। नागरिकलाई किन चन्दा दिने, सरकारलाई किन सहयोग गर्ने भन्ने आशयका सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिएको छ।
पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीश निसारले दैनिक रकम जम्मा हुने क्रम बढिरहेको र त्यसले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिए। 'रकम दिन दिनै बढीरहेको छ। धेरै नागरिक उत्साहित छन्। सरकारले लिएको चन्दाको समेत रेकर्ड राखिएको छ। कुन स्थानबाट कसले कति चन्दा दियो भनेर पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ। यसले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास समेत बढ्दै गएको छ' उनले भने।
प्रधानमन्त्री इमरान खानले देश तथा विदेशका पाकिस्तानी नागरिकसँग चन्दाका लागि लामो अपिल गरिसकेका छन्। उनकैअपिलमा ‘हामीले हाम्रा लागि गरौ, आफ्नो क्षमतामा गरौ र आफूलाई विश्वास गरौ’ भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नेपालले पनि खान सरकारजस्तै केही सकारात्म्क अभियान सञ्चालन थालनी गर्न सक्छ? प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
बाँध बनाउन धेरै पैसा आवश्यकता पर्ने भएपछि तीब्र गतिमा अभियान थालिएको हो। यसले सबैले देशलाई लगानी गरौ, देशले पछि दिनेछ भन्ने भावना जागृत भएको छ। पाकिस्तानले चन्दा उठाएर केही ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ भने नेपालमा पनि त्यस्तो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले प्रयास गर्न सक्छ। किनकी पाकिस्तानको खान नेतृत्वको सरकार नवनिर्वाचित हो। उसले अगाडि सारेका केही कार्यक्रमले यतिखेर संसारको ध्यान खिचिरहेको छ।
नेपालले पनि खान सरकारजस्तै केही सकारात्म्क अभियान सञ्चालन थालनी गर्न सक्छ? प्रश्न महत्वपूर्ण छ। रासस
_x000D_ -समाचार एजेन्सीहरुको सहयोगमा